Shiinaha 800KW Cabbiraha alxanka aadka u sarreeya ee gobolka - laba -hawlgal Mashiinka alxanka biibiilaha ayaa dhigay warshad iyo soo -saareyaal | Mingshuo
Soo -saaris Horudhac ah mashiinka alxanka ee taabashada/Induction
Mashiinka alxanka ee heerka-sare ee adag wuxuu adeegsadaa shirkadda IXYS ee Jarmalka IXFN38N100Q2 38A/1000V MOSFET-ka awoodda sare leh iyo DSEI 2 × 61-12B 60A/1200V diode soo-kabashada degdegga ah si loo sameeyo wareeg wareegsan oo taxane ah. Aaladda inverter -ka waxaa lagu rakibay hab boodh -boodh ah, oo ka duwan nooca isbarbar socda. Habka alxanka guddiga wareegga ee aaladda inverter ee mashiinka alxanka-soo noqnoqda ee aadka u sarreeya.
Halbeegga Wax -soo -saarka (qeexidda) ee 800kw Birta Furniture Weelka Warshadaynta Biibiile samaynta mashiinka tuubooyinka mashiinnada
Qalabka biibiilaha birta kaarboon/birta aluminium/birta aan lahayn/ERW/galvanized/birta/birta naxaasta ah
Qaabka tuubooyinka Round, Square, Rektangular, H-shape, Qaab gaar ah
Awooda wax soo saarka 800kw
Qiimeynta Hadda 2000A
Tuubooyin kala duwan oo lagu talin karo oo ay alxan karaan 800kw HF SOLID STATE PIPE WELDER
Qalabka biibiilaha Birta kaarboon
Dhexroor tuubo 114-273 mm
Dhumucda derbiga biibiile 4.0-10.0mm
Habka alxanka Xiriirka/labada nooc ee Mashiinka Alxanka Gobolka ee Joogtada ah ee Joogtada ah
Habka Qaboojinta Isticmaal nidaamka qaboojiyaha Biyaha si aad u qaboojiso nooca soo-gelinta 800kw ee alxanka soo noqnoqda ee heer-sare
Qaabdhismeedka Waxqabadka ee gacanta alxanka ee kala duwan oo aad u sarreeya oo alxanka gobolka adag
Alxanka xad -dhaafka ah ee aadka u sarreeya ee gobolka ayaa inta badan lagu dabaqaa xarriiqda toobinta toobinta tooska ah ee toosan. Awoodda soo noqnoqoshada sare waxay qaadataa qaab-dhismeedka soo noqnoqda ee AC-DC-AC. Hagaajiyuhu wuxuu ansixiyaa 3-waji 6-garaaca thyristor-ka toosinta, IGBT DC jarista ama 3-waji 12-garaaca thyristor hagaajinta. Inverter wuxuu qaataa koronto aad u weyn MOSFET si uu u sameeyo inverter buuxiya buundada oo buuxa. Waxsoosaarka Inverter -ku wuxuu qaataa wax -ku -beddel u -dhigma ferrite -ga wax -ku -oolka ah si uu u dhammaystiro isku -darka awoodda, is -waafajinta impedance iyo go'doominta korantada. Wareegga taangiga resonant wuxuu qaataa resonance taxane ah oo dhinaca labaad ah.
Qalabka oo dhan wuxuu ka kooban yahay kabadhka hagaajinta kabadhka kabadhka, kabadhka wax soo saarka inverter, wareegga nidaamka qaboojinta biyaha jilicsan, konsole iyo miiska meelaynta.
Hore: 600KW Taxanaha iskuxirka Solid state alxanka aadka u sarreeya Shiinaha MOSFET Automatic state hf induction induction alxanka kuleyliyaha
Xiga: 200KW Bir -tuuraha bir -birta ah ee Impeder ee Aaladda Alxanka Induction Frequency High
100KW Nooca iskuxirka Taxanaha IGBT Integrated So ...
Carbon biibiile bir tuubo for wat dhismaha steel ...